トップページ ＞ 言語 ＞ ズールー語 ＞ Kubantu abafuna ukuba silinganisele enaleni, imodeli ukufakwa kanye ukucushwa imodeli wamakhaza pachinko
Wena, ngaya esikhungweni sokukhosela emakhazeni pachinko, ngicabanga ukuthi ngokukhetha play onobuhle ukubheka lonke esitolo sokuqala. Ngakho, uma uzama ukunqoba kunjalo, kungakhathaliseki ukuthi ngingaya ukudlala kunoma iyiphi onobuhle, izitolo kwanoma iyiphi ukuxubana imodeli uzoqhubeka ukubheka kanjani okuhle. Pachinko esitolo, kodwa anemisila ezihlukahlukene onobuhle, ingxenye ukuthi ngifuna isiqinisekiso engcono kuyinto big hit okungenzeka.
manje, pachinko kokubili slot, ngoba umagazini iphumele eziningi, zama ukuhlola ngaphambi ezodlala.
pachinko, kusukela big hit okungenzeka kuthiwa ephezulu Spec onobuhle okusezingeni eliphezulu, ezihlukahlukene kuze model of the Amathuba ongaphakeme ukuthi kuthiwa Dejihane. Ukuze slot, ngokuvumelana kulungiselelwa, kukhona okungenzeka ukuthi ubizwa ngokuthi uqhekeko lokukhanda.
ngalokho ufuna onjani indlela ukudlala, mina umehluko imifanekiso ukukhetha uyaphuma, okungenzeka Kunconywa kangcono pachinko uyisibonelo okuyinto kuthiwa phakathi uhlobo specs. Ephakathi uhlobo Ukucaciswa, kungaba ngesikhathi isikhundla Lesisemkhatsini ematfuba jackpot ephezulu Spec futhi Dejihane.
Dejihane ngokwanele, kodwa akukho lula hit, njengoba ephezulu Spec, ngisho Friend ingxenye umlutha kuba, ngiqonde ukuthi utshalomali nalo ngaphansi kakade, iwina futhi kulindeleke uku pachinko. Kuyinto win ezinkulu nabo uma ephezulu Spec Kunconywa, kodwa kusukela umlutha futhi ezinkulu, kukhona kungenzeka ukuthi liyaphuma utshalomali ukuvuvukala esikhulu, iyadingeka futhi ukulungela ukunqotshwa ezinkulu.
Dejihane nokukhuluma, jackpot ngeke kujule ngokushesha, kodwa wenkokhelo amancane muhle uma ngenjongo play, asifanele uma ufisa uwine.
By endleleni, slot cishe setha 1 itafula wamakhaza pachinko. Kukhona intando lapho izilungiselelo Lesisemkhatsini nazo langena izimoto eziningana ukuze ubonise ibhola ngaphandle, kodwa ukubeka 6, Ngicabanga ukuthi kungcono ukuthi ngimncane ezishukumisa afakwe ibhizinisi evamile.
Ngakho-ke, ukunakekelwa umshini uhlukanise esimweni ukubeka 1. I eduze umshini wabele amaphesenti 100 isethi 1, kuyoba lula ukudonsa lemali utshalomali ibhonasi kancane. Ngaphezu slot, A umshini T ne umshini ART futhi umshini evamile, noma okunye okunjalo, futhi uyaphuma umehluko of the sebhithi. Umshini evamile, ngivuka labo RT umsebenzi, umshini yokuhlukanisa ka endleleni lapho isethwe 1, kunomkhuba ka ethe xaxa.
Wabasaqalayo okungukuthi, umshini evamile akuyona incazelo ye-RT, njll ngaphandle kokungenela lobuchwepheshe ezifana push iso Kunconywa. Pachinko kokubili slot, kodwa ayikho indlela ezifana ngokuqinisekile uwine, zidinga utshalomali kancane, kubalulekile ukukhetha play lula kukhombisa onqobayo futhi kulindeleke. Kusukela phakathi
ukudlala lula kukhombisa, funda negagasi umshini isibani idatha, kanye ukucacisa eyodwa ukutshala, futhi ngeke wandise iphesenti yakho ngokuwina kuka zifa ukudlala. Ngemva kwalokho, futhi imodeli abaye iwine ngaphambili, uma Woza okhethiwe amamodeli Ngifuna ukudlala, ngicabanga noma cha okwengeziwe ukuze ujabulele pachinko.
Uma ufuna Slingshot, ukhethe ukufakwa esitolo phakathi uhlobo specs ngokuvamile, esimweni lapho slot, ukhetha esitolo yakho setha 1 umshini uhlukanise kukhona onobuhle eziningi eduze 100%, ujabulela ezihlukahlukene onobuhle Sicela bheka.
ukunqoba futhi kubalulekile, kodwa iqhinga lokuthi kuba black ukulinganisela ukuthi akaphelelwa okungangako. Uma ungumsebenzisi eziphambili, Ngithemba ngisho noma okuhloswe ngaso ukunakekelwa ephezulu Spec bayanda abantu abafuna inzuzo sikhathi ibhalansi, kunconywa ukuthi uhamba isihloko ningalahlekelwa ezingaphezu kuka siyawina. Futhi onobuhle aseke iwine ngaphambili, uma Woza okhethiwe amamodeli Ngifuna ukudlala, ngicabanga ukuthi kuyoba okwengeziwe ujabulele pachinko.
ukunqoba futhi kubalulekile, kodwa iqhinga lokuthi kuba black ukulinganisela ukuthi akaphelelwa okungangako. Uma ungumsebenzisi eziphambili, Ngithemba ngisho noma okuhloswe ngaso ukunakekelwa ephezulu Spec bayanda abantu abafuna inzuzo sikhathi ibhalansi, kunconywa ukuthi uhamba isihloko ningalahlekelwa ezingaphezu kuka siyawina.